Faah-faahin ka soo baxaysa dagaalkii Dhuusamareeb ee Galmudug iyo Ahlu sunna | Xaysimo
Home War Faah-faahin ka soo baxaysa dagaalkii Dhuusamareeb ee Galmudug iyo Ahlu sunna
Waxaa magaalada Dhuusamarreeb ku soo laabanaya dadkii ka qaxay dagaalkii shalay magaaladaasi ku dhex maray ciidamada dowladda Soomaaliya oo isugu jira booliska sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad, kumaandoosta Gorgor iyo milateriga. Xaaladda magaalada ayaa saaka deggan. Dagaalkan oo aan weli war rasmi laga soo saarin khasaaraha ka dhashay, ayaa la soo sheegayaa inay jiraan dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dhinacyadii dirirtu u dhaxaysay.
Guddoomiyaha Dhuusamareeb Cabdiraxmaan Geedaqorow ayaa warbaahinta u sheegay in magaalada laga saaray ciidankii soo weeraray ee Ahlu-Sunna, sidoo kale khasaaraha ka dhashay dagaalkii shalay ayuu sheegay in guddi gaar ah loo xir saari doono. Hay’addaha samafalka ayuu ugu baaqay guddoomiye Geedoqorow inay gacan siiyaan dadka ka cararay dagaallada ee haddana doonaya in ay dib u soo laabtaan.
Marka laga soo tago guddoomiyaha Dhuusamareeb oo ka hadlay xaaladdan hadda taagan, ma jirto cid kale oo ka tirsan madaxda Galmudug oo dagaalka ka hadashay, waxaana dagaalku ku soo aadayaa xilli uu jiro mashquul badan maadama barri oo Axad ah ay dhacayso doorashada madaxweynaha Soomaaliya.